Al-shabaab oo qarax ismiidaamin iyo weerar toos ah maanta ku qaaday saldhiga dhexe ee Beledweyne – Radio Daljir
Al-shabaab oo qarax ismiidaamin iyo weerar toos ah maanta ku qaaday saldhiga dhexe ee Beledweyne
Nofeembar 19, 2013 4:09 b 0
Beledweyne, November 19, 2013 – Barqadii maanta ayaa baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxaa uu galay saldhiga booliska ee degmada Beledweyne, halkaas oo saldhig u ah ciidamada booliska ee maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidamo ka tirsan howl-galka AMISOM oo ka socda Jabuuti.
Qarax xoog badan oo saldhiga ka dhacay kadib, waxaa weerar toos ah ay kooxo hubaysan ku qaadeen saldhiga, kooxda ayaa adeegsatay hubka cul-culus gaar ahaan qoryaha garabka laga rido ee baasuukaha iyo qoryo kale.
Ciidamada huwanta ah ee dowladda iyo kuwa AMISOM iyo kooxda ayaa is dhaafsaday rasaas kala duwan oo xoog badan, waxaa la soo sheegayaa in khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac ah iyo mid hantiyeed intaba uu dagaalku reebay.
Booliska dowladda iyo AMISOM ayaa isku fidiyey xaafadaha kala duwan ee magaalada, waxaa haatan socda howl-galo lagu baadi goobayo ragii qaraxa iyo weerarka tooska ah ee qorshaysan ku qaaday saldhiga dhexe ee Beledweyne.
Wararka la xiriira khasaaraha uu reebay qaraxa saldhiga ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah iyo ciidamada goobta joogay balse aan la aqoon inta ay tahay, waxaa sidoo kale burbur soo gaaray dhismayaal ku dhow saldhiga iyo meelo kale oo muhiim ah.
Kooxda Al-shabaab ayaa loo badinnayaa in ay weerarka soo qaadeen in kastoo aan la xaqiijin karin, bilo ka hor ayaa weerar is-qarxin ah lagu qaaday makhayaado lagu shaaho oo ku yaala Beledweyne, halkaas oo ay ku dhinteen dad rayid u badan.
Madaxda Soomaaliya oo tacsi u diray ehelada dadkii wax ku noqday weerarkii maanta ee Beledweyne
Soomaaliya oo loogu baaqay ansixinta sharciga mamnuucida Burcad-badeeda ee xeebaha dalka